Don't fear the darkness if you carry the light within.
ကိုယ့်ဘဝ ထဲက ထွက်သွားပြီး
တစ်ချို့က ကိုယ့်ဘဝ ထဲကို
တစ်ချို့က မေတ္တာ တွေပေးတယ်
ခါးသီးခြင်းတွေ နဲ့ ချိုမြိန်မှုတွေကြားမှာ
မျှတ တဲ့ ဒုက္ခ တွေကို
ခံယူရင်း … သေဆုံးသွားတာချည်းပါပဲ…
" ဝဋ် " ကျွေးကျေဖို့
Posted by The Light4U at 4/13/2018 10:32:00 PM No comments:
Labels: Poem (ကဗျာ), ရသစာပေ
ရေးသူ - ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ / Phio Thiha
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အကင်ဆိုင်သွားဖြစ်တဲ့အခါ ကြက်သွန်ဖြူကင်၊ ရုံးပတီးသီးကင်၊ အာလူးကင်၊ စသဖြင့် ကျွန်တော် စားတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ဒါတွေကို ကြိုက်တယ်ထင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအကင်တွေနဲ့ တွဲစားရတဲ့အချဉ်ရည် မရှိတဲ့အခါ၊ အဲ့ဒီအချဉ်ရည်က ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရသာမျိုး ဖြစ်မနေတဲ့အခါကျ သူတို့ချည်းသက်သက် စားပါဆို ကျွန်တော် မစားနိုင်တော့ဘူး။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်ဟာ အဲ့ဒီအကင်တွေကို မကြိုက်ဘူး၊ အချဉ်ကြောင့်သာ ကြိုက်တယ်ထင်ခဲ့တာ။
အချစ်ဆိုတာလည်း အဲဒီလိုပဲ။ (အကင်ကိုတော့ ချစ်တယ်ရေးမရလို့ ကြိုက်တယ်လို့ပဲ ရေးပါတယ်) ရုပ်ရည်အလှအပ၊ အရည်အချင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဒီလို ဘယ်တစ်ခုအပေါ်မှာမှ မှီခိုထားခြင်း မရှိဘဲ သူ့ဟာသူ လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိနေတဲ့အရာကို အချစ်လို့ခေါ်တယ်။
Posted by The Light4U at 7/04/2017 06:49:00 PM No comments:
Labels: Notes (မှတ်စု)
ကျနော် အဖေ့ကို အလေးစားဆုံး အချက်တွေထဲမှာ လေ့လာစူးစမ်းမှုအားကောင်းတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ ပြတ်သားတာတွေဟာ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အရွယ်မှာ ဘယ်ဖက် လက်တစ်ဖက်လုံး ဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမယ့် တဒင်္ဂပဲ စိတ်ဓါတ်ကျလိုက်ပြီး ဇနီးကောင်းအမေ့ရဲ့ အားပေးကူညီမှုနဲ့အတူ သားသမီး ခြောက်ယောက် (ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆုံးသွားတဲ့ အစ်မကို ထည့်ပြီး မရေတွက်ခဲ့ရင်)ကို ဘွဲ့အသီးသီးနဲ့ လူလားမြောက်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့လူ။ ခုချိန်ထိ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ၊ ခံယူချက်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ထောက်ပြပဲ့ပြင်ပေးနေတဲ့သူ။ သူလို အဖေမျိုးကို ဂုဏ်ယူစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျနော်ဟာ လမ်းဘေးမှာ လက်တစ်ဖက်ပြတ် တောင်းစားနေတဲ့လူတွေ၊ တခါတလေ အဲဒီထက်ဆိုးပြီး ခြေလက် အကောင်းကြီးနဲ့ တောင်းစားနေတဲ့လူတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါ မသနားတတ်တာ ကျနော့် အဆိုး မဆိုနိုင်ဘူး။ အဖေ့ရဲ့ အရည်အသွေးတွေ တောက်ပြောင်ရခြင်းအဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ စာဖတ်အားကောင်းတာလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ကျနော့်ကိုလည်း စာစုံဖတ်ဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းလေ့ရှိတယ်။
Posted by The Light4U at 6/18/2017 09:00:00 PM No comments:
အားနာလှပါသည် မြတ်စွာဘုရား (အပိုင်း ၂)
အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အပါအဝင် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ ယုံကြည်ဆောင်ရွက်နေသည်များမှ အမြင်မတော်သည်များကို ထောက်ပြထားသည့် စာစု ဒုတိယပိုင်းအား ဆက်လက် ဖော်ပြပါသည်။
အပိုင်း (၁) ကို ကြည့်ရန် ဤနေရာ ကို နှိပ်ပါ။
Posted by The Light4U at 5/19/2017 03:58:00 AM No comments:
Labels: Religion (ဘာသာရေး), သုတစာပေ
ကြည့်ရန် ပုံကို နှိပ်ပါ။
တစ်ခုခုရိုက်၍ ရှာရန် . . .
ဒေါက်တာဇော်ငြိမ်းအေး တစ်ဦးတည်း မူပိုင် ဖြစ်သည်။. Simple theme. Theme images by gaffera. Powered by Blogger.